Ofurufushwa nechipoko chababa | Kwayedza
Ofurufushwa nechipoko chababa
06 Dec, 2019 - 00:12	 2019-12-05T12:25:56+00:00 2019-12-06T00:04:18+00:00 0 Views
“Handina mufaro, ndangosara ndiri ndoga. Amai ndivo vakatanga kufa netsaona gore rakapera apo vaibva kurufu kuChitungwiza vari mumota yababamudiki. Vakafa vose ipapo nababamudiki.
“Gore rino mumwedzi waGunyana, kwakaita mitumbi mitatu inoti wababa vangu, munin’ina nehanzvadzi, vose vakafa vakatevedzana asi vasina kurwara,” anodaro Tafirenyika.
Mukomana uyu – uyo asati aroora – anoti baba vake vakangofa vachiti vairwadziwa nemusoro uye munin’ina wake ndokufa achipupa furo mukanwa.
Hanzvadzi yake inonzi yatangawo kurasika njere ikazongotetereka kubva pamba ndokuzonhongwa akafira musango.
“Munin’ina ndiye akatanga kufa, baba ndokutevera mushure memasvondo maviri.
“Hanzvadzi yangu yaigara kuSouth Africa akauya kunhamo yevanhu vaviri ava akabva asvikotanga kurasika njere ndokutiza pamba.
“Mutumbi wake takazounhonga mudondo.
“Vanhu vaitaura umu vaisanganisira mazwi echidzimai nevarume asi izwi rababa vangu ndiro raiva pamusoro.
“Ndakatiza ndokuenda kuvavakidzani ndikazodzoka mangwana acho ndikawana mumba umu musina kumbokuhwidzwa moto uyewo dhoo rakakiiwa.”
“Mbatya dzamai vangu hadzina kugovewa asi dzakatorwa nagogo (amai vababa) uyewo dzevamwe ava dzakagovewa asi nyaradzo haina kuitwa.”
Tafirenyika anoti nguva zhinji anopoya nepahwindo kana chipoko ichi chapinda mumba onorara kumamana.
Hama dzaamai vake anoti dziri kuMalawi kunova kumusha kwavo uye baba vake vaiva vakaberekwa vari vaviri chete nemunin’ina wavo uyo akafa mutsaona pamwe chete naamai vake.